Somali / af Soomaali - LaborStandards | seattle.gov
Hawlgalka Xafiiska Heerarka Shaqaalahu waa sidii lagu horumarin laha heerarka shaqada iyada oo si quman looga soo qeybgelinayo bulshada iyo ganacsatada, fulinta istaraatiijiga ah iyo horumarinta siyaasada cusub, ka go'naanta caddaaladda bulshada iyo jinsiyada.
Sharuucda Heerarka Shaqaalaha Seattle ee 2017
Sharuucdaani waxay quseeyaan dhamaanba shaqaalaha ka shaqeeya xadadka seattle gudaheeda, iyadoo aan loo eegayn qof ka shaqaalaha ah xaaladiisa sharciga socdaalka ama halka goobta shaqada ay ku taalo.
Bixinta Xiliga Xanuunka iyo Amaanka (SMC 14.16)
Waxay u baahan tahay fasax lacaga oo ah arrimo caafimaad ama amaanka
Shaqo Fursado loo Siman yahay (SMC 14.17)
Xadadysa isticmaalka diiwaanka xiritaanka iyo xukunka
Mushaharka ugu yar (SMC 14.19)
Waxay dejisaa mushaarka ugu yar ee shaqaalaha
Xatooyada Mushaarka (SMC 14.20)
Waxay badbaadisaa xatooyada mushaarka
Sharciga Maamuleed ee Seattle ee Xatooyada Mushaharka (SMC 14.20)
Shaqaalaha Seattle waxay leeyihiin ilaalin dheeraad ah xatooyada mushaharka.
Laga bilaabo Abriil 1, 2015, sharci cusub ee xatooyada mushaharka ayaa ka raba loo-shaqeeyayaasha leh shaqaale ka shaqaynaya Seattle inay bixiyaan dhammaan mushaharka iyo bakhshiishka lagu leeyahay; bixiyaan macluumaadka shaqaalaynta wakhtiga shaqaalaynta, beddelista shaqaalaynta iyo wakhti kasta oo mushaharka iyo bakhshiishka la bixinayo; inay bixiyaan ogaysiis qoran xuquuqda shaqaalaha marka la eego xatooyada mushaharka.
Ogaysiiska qoran waa in lagu bixiyo Ingiriisi, Isbaanish iyo luuqadaha kale ee shaqaaluhu ku hadlo goobta shaqada.
Sharcigu sidoo kale wuxuu oggol yahay Xafiiska Magaalada ee Istaandarrada Shaqaalaha, qayb cusub oo ka tirsna Xafiiska Seattle ee Xuquuqda Madaniga ah, inay samayso baadhitaano maamuleed ee bixin la’aanta mushaharka iyo bakhshiishka.
Wali waa dambi in la galo xatooyada mushahar marka la eego SMC 12A.08.060.
Loo-shaqeeyayaasha waxa ka mamnuuca inay ka qaadaan ficil gurracan (sida, eri, hoos-u-dhig, iyo hanjabaad in loo sheegayo hay’adaha socdaalka) qof isticmaalaya xuquuqda uu dhawray sharcigani.
Shuruucda Heerke Shaqaale ee Seattle 2019
ILAALINTA JADWALKA SHAQAALAHASMC 14.22
Seattle Office of Labor Standards (Xafiiska Heerarka Shaqada ee magaalada Seattle) Notice of
Employment Information (Ogeysiinta Warbixinta Shaqada)
Loo-shaqeeyayaashu waa inay siiyaan macluumaad shaqaalayn oo qoran shaqaalaha ka shaqaynaya Seattle wakhtiga shaqaalaynta & inta lagu jiro mushaharka hal wakhti kahor intaanu isbeddel ku dhicin shaqaalaynta.
Ogeysiinta Saacadaha Dheeraadka ah
Seattle Office of Labor Standards (OLS, Xafiiska Heerarka Shaqada) - Balanqaadkeena
ku aadan Bulshooyinka Muhaajiriinta iyo Qaxootiga
Xafiiska Heerarka Shaqaalahu
Saacadaha: 8 am–5 pm (Isniinta - Jimcaha)
Adeegyo Qarsoodi iyo Bilaash ah
Cawinaada farsamo ee ganacsatada.
Khayraad iyo U diritaano.
Afcelinta, turjibaanka luqadaha iyo qabanqaabo ayaa diyaara.
Loo-shaqeeyayaashu waa inay ku dhaqmaan sharuucdaan. Ka-aargoosashadu waa sharci daro.
Waxaad dacwadaada u gudbin karta Xafiiska Heerarka Shaqaalaha
Waxaad dacwadaad u soo gubin karta maxkamada ka dib ama*:
Abriil 1, 2016 Loo-shaqeeyayaasha waawayn (50 ama shaqaale ka badan)
Abriil 1, 2017 Loo-shaqeeyayaasha leh (50 ama shaqaale ka yar)
Dacwada waxaa laga qaadan karaa oo kaliya mushaharka ugu yar, xatooyada mushaharka & ku-xadgudubka bixinta fasaxa waqtiga jirada iyo ammaanka.